Mustafe Muxumed Cumar oo Codkiis Adkeeyey – Rasaasa News
Mustafe Muxumed Cumar oo Codkiis Adkeeyey
Jijiga, Sept 30,2018 – Madaxwaynaha Deegaanka Soomaalida Mustafe Muxumed Cumar, ayaa soo saaray digniino iyo waarano is daba-joog ah oo ku socda dadkii la shaqayn jiray dawladii hore.
Arintan ayaa timid, ka dib, kolkii dad badan oo hore u taageeri jiray dawladii hore, ay taageereen ururka ONLF, oo heshiis nabadeed la galay dawlada Itoobiya. Arintaas oo ayna jeclaysan dadka ka soo horjeeda ONLF, ayaa ku riixday Mustafe in uu u digo dadkaas.
Mustafe Muxumed Cumar, oo hore u ahaan jiray sarkaal u shaqeeya United Nation-ka, in madaxwayne uu u noqdo deegaanka Soomaalida, waxaa R/wasaraha Itobiya Abiye Axmed, ka gaday gudoomiyaha Oromo Media Network Jawhar Maxamed (activist).
Mustafe kuma jiro xisbiga deegaanka Soomaalida xukuma, waxaana lagu ladhay Axmed Shide si ay ay dawlad u soo wada dhisaan, Axmed Shide (Hooyo/Somali/Akishe) dhawaan ayaa laga dhigay gudoomiyaha xisbiga Soomaalida.
Awood la,aanta Mustafe, waxay sababtay faragalinta Jabouti iyo Maamulka Soomaaliland. Ismaaciil Cumar Geele wuxuu u diray Jijiga wasiirkiisa cadaalada Muumin Axmed Sheekh iyo Muse Biixi Cabdi wuxuu u diray Jijiga odayaal. Sidaas ayuu Mustafe beesha ciise ku siiyey 3/27 wasiir, beesha Isaaqna 2/27 ayey heshay.
Cadaalad daro in wax lagu qaybiyo go,aan Mustafe ma aha, waa Jawhar Maxamed, oo doonayay in awooda Soomaalida la qaybiyo, si xukuumada Oromadu uga nabad gasho colaad kaga furanta dhanka Soomaalida.
Abiye Ahmed oo Baaho u Bixi Doona Bishan